[Review] Top 5 màu son Gucci đẹp sang chảnh nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 5 màu son Gucci đẹp sang chảnh nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Uma kukhulunywa ngemigqa i-lipstick ephezulu Njengamanje, kungaba ukweqa okukhulu ukungazinaki I-lipstick ye-Gucci – indoda enkulu embonini ye-lipstick nezimonyo emhlabeni. Eminyakeni yamuva nje, i-Gucci yethule imiklamo eminingi ye-lipstick esezingeni eliphezulu futhi edonsa amehlo emakethe. Nokwazi ukuthi yimiphi imibala ye-Gucci lipstick “enamandla”, silandele futhi wabelane ngayo maduze.
1 Mayelana ne-Gucci lipstick brand
2 Ingabe i-lipstick ye-Gucci inhle?
3 Ukubuyekezwa kwemibala emi-5 ekhangayo nenhle ye-Gucci lipstick okufanele ubhekisele kuyo
3.1 3.1 Gucci 505 lipstick – Janet Rust
3.2 3.2 Indodana uGucci 208 Bahlangane e-Argentina
3.3 3.3 Gucci 308 Lucy Dark Orange lipstick
3.4 3.4 Gucci 25 Goldie Red lipstick
3.5 3.5 Gucci 504 Matte Myra Crimson
Mayelana ne-Gucci lipstick brand
I-Gucci akumele ibe yinqaba kubalandeli bobuhle bomhlaba. Lo mkhiqizo wazalwa ngo-1921 eFrance. Ekuqaleni, iGucci yayidume ngamaqoqo ayo ezingubo zokugqoka, izesekeli, namakha ayemukelwa kabanzi emakethe yamazwe ngamazwe.
Futhi ngemuva kokuthuthukiswa ngempumelelo ngezinto zemfashini, i-Gucci ingene ngempumelelo emkhakheni we-lipstick neminye imigqa yezimonyo. Lapho, i-Gucci itshala imali ngokungathí sina nangokucophelela emigqeni indodana yethula njalo amamodeli e-lipstick amasha nekhwalithi.
Ngakho-ke, uma kukhulunywa nge-lipstick ye-Gucci noma eminye imikhiqizo enophawu lwe-Gucci, odade bonke bayayithanda ngoba ikhwalithi “phezulu”. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi lolu hlobo lomkhiqizo ludume emhlabeni wonke, abantu besifazane bathembela kakhulu futhi bafisa ukuba ne-Gucci lipstick, ukuze babonise izinga kanye nokuhlobisa nokuqinisekisa ukuphepha mayelana nekhwalithi yezindebe zakho siqu.
Ingabe i-lipstick ye-Gucci inhle?
Mhlawumbe lokhu kuzoba yinkinga abathengi abaningi abazibuza futhi abayikhathalele lapho bekhetha ukuthenga i-lipstick ye-Gucci. Kepha singakuqinisekisa ukuthi i-Gucci lipstick yinhle, isezingeni futhi ikufanele ukuthenga ngenxa yalezi zici ezilandelayo.
Okokuqala, izindebe ze-Gucci zinekhwalithi ephezulu kakhulu kanye nokuvela okuqinisekisiwe. Iphuma kubhrendi yemfashini, ubucwebe nezimonyo ehamba phambili emhlabeni, ehlala iphezulu kumabhrendi okunethezeka emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, ikhwalithi ye-Gucci lipstick ihlale ibekwe phezulu nochwepheshe abanolwazi nobuchwepheshe obuphambili nobesimanje.
Ngaphandle kwalokho, uhlu lwesithako se-Gucci lipsticks laziswa kakhulu odokotela nodokotela besikhumba uma lukhishwa kakhulu emvelweni njengengcina yezinyosi, uwoyela wemifino, ikhasi le-tangerine, izimbali, kanye nezithako ezisebenzayo. HA….
Ngaphezu kwalokho, i-lipstick enhle ye-Gucci nayo ilele ekusetshenzisweni kwayo okuvelele, hhayi nje ukuhlobisa izindebe zakho. Ngakolunye uhlangothi, i-Gucci iphinde inikeze imisoco edingekayo ukuze igcwalise umswakama, ithobe futhi ikhawulele ukuchachamba, futhi isize ukuthuthukisa ezinye izifo zomlomo …
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwe-Gucci lipstick kuqinile ngokwedlulele futhi muhle. Kuhambisana nalokho izinhlobonhlobo zemiklamo nezitayela ezifana neGucci 500, Gucci 505, Gucci 504, Gucci 25, Gucci 509…. Inani le-lipstick yeGucci lisezingeni eliphezulu, kodwa kwabesifazane abanothando. ungakwazi ukukhokhela.
Ukubuyekezwa kwemibala emi-5 ekhangayo nenhle ye-Gucci lipstick okufanele ubhekisele kuyo
Njengamanje, uhlobo lwe-Gucci lwethulwe emakethe ngezinhlobonhlobo zamamodeli we-lipstick, ngakho-ke ungaba nesikhathi esinzima sokukhetha. Ukuqonda lokho, maduze sizonikeza iziphakamiso ezi-5 mayelana nomugqa I-lipstick ye-Gucci kukusiza wenze ukukhetha okuphelele nokulungile.
3.1 Gucci 505 lipstick – Janet Rust
I-Gucci 505 eyaziwa nangokuthi nguJanet Rust, lena lipstick ebomvu ebomvu enombala osawolintshi futhi ayinasisekelo esiphinki. Kungashiwo ukuthi iGucci 505 ingenye yemibala ethengiswa kakhulu ye-lipstick yenkampani kuze kube manje.
Mayelana nomklamo, amaphuzu e-Gucci 505 lipstick anomklamo kanokusho onombala Wegolide wezinga eliphezulu, ogqugquzelwe yi-Art Deco, okuvumela ukudala imigqa eqondile ehlaba umxhwele. Ngaphezu kwalokho, ekuboneni kokuqala, ungase ukuthole kufana noCharlotte Tilbury, kodwa uma ubhekisisa, uzobona ukuthi lo mugqa we-lipstick mncane futhi uklanywe ngobunyoninco.
Ingaphakathi le-lipstick nalo lihlaba umxhwele impela ngezindebe ezigobile ezishayeka kalula uma zifakwa ezindebeni. Emzimbeni we-lipstick kubhalwe igama elithi Gucci, elibukeka lihle kakhulu futhi livelele kakhulu kune-lipstick evamile.
Ngokwekhwalithi ye-lipstick, i-Gucci 505 inokuthungwa kwe-lipstick ethambile futhi ebushelelezi, ngakho-ke uma ifakwe ezindebeni, iwumbala ojwayelekile kakhulu. Kwabanye abantu abanezindebe ezomile, kuyadingeka ukufaka ungqimba lwe-balm bese usebenzisa le lipstick ye-Gucci 505 ukuze ibe yinhle njengenjwayelo. Ngaphezu kwalokho, i-lipstick ayibangeli ukuphrinta kwezindebe, kodwa ngokuphambene nalokho, iphinde isize izindebe ukuba zibe yi-plupper futhi zihle kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, ukunikeza ukubamba okuqinile amahora amaningi nakho kungamaphuzu enza i-Gucci 505 ihluke.
Mayelana nephunga le-lipstick lithambile, lithambile futhi liyaphumuza impela. Lapho i-lipstick esezindebeni izindebe izacile futhi ibushelelezi, ayikali izindebe futhi ayizivezi izindebe. Isikhathi sokunamathela ezindebeni cishe amahora angu-8, lapho udla, izogezwa kodwa ishiye i-lipstick ekhanyayo e-pink ezindebeni kanye nokungesabi ukunamathela kwe-lipstick enkomishini noma endishini.
3.2 Indodana uGucci 208 Bahlangane e-Argentina
Lena i-Gucci 208 matte lipstick enombala ophinki womhlaba omusha nohlukile, ikakhulukazi wemvelo yakhe, ubuntu kanye nokuba aveze isitayela sakhe ngokuzethemba. Ngaphezu kwalokho, lokhu futhi kuyisinqumo esiphelele samantombazane abathanda isitayela se-Western makeup, egcwele umoya wesimanje.
Mayelana nombala we-lipstick, lo mkhiqizo uqukethe umbala ophinki ojulile womhlaba ngenxa yesilinganiso esiphezulu sokuxutshwa kwemibala yomhlaba. Kodwa hhayi ukuze le lipstick ye-Gucci 208 ibe ukukhetha kubasebenzisi. Ngokuphambene nalokho, umbala we-lipstick uyashintsha ngokuya ngombala wesikhumba, ngakho-ke lo mkhiqizo ulungele kakhulu amantombazane ase-Asia.
Mayelana nokwakhiwa kwe umhlaba pink lipstick Konke lokhu kukhishwe izithako zemvelo eziphephile ezindebeni. Kuhlanganiswe nezithako ezisebenzayo ezithambisa futhi zondle izindebe, gwema ukumnyama nokuxebuka kwezindebe ngempumelelo kakhulu.
Ukuthungwa kwe-lipstick ye-Gucci 208 kuncane kakhulu, uma kusetshenziswe ezindebeni, kubushelelezi ngokwedlulele, ngaleyo ndlela kuletha izindebe eziyengayo. Ikakhulukazi, i-lipstick yomkhiqizo inezakhi zokusiza izindebe ezithambile, kanye nokumbozwa okuphezulu, ngakho-ke ifihla izindebe zakho ngokuphelele.
Ngaphandle kwalokho, ngoba i-Gucci 208 Bahlangana e-Argentina lipstick ingeyomugqa we-lipstick weGucci Rouge à Lèvres Mat. Ngakho lesi yisihlahla i-lipstick ye-matte kufanele ibe nokushesha kombala okufika emahoreni angu-8, okukuvumela ukuthi udlale usuku lonke ngaphandle kokukhathazeka ukuthi izindebe zakho zizoba zinhle kancane. Iphunga lalo mkhiqizo liyiphunga elimnandi elimnandi elinezithelo uma livulwa, kodwa uma lifakwa ezindebeni, lizophela.
3.3 Gucci 308 Lucy Dark Orange lipstick
I-Gucci 308 Lucy Lipstick Emnyama Ewolintshi ithathwa njengelipstick enhle kunazo zonke kuphalethi ye-Gucci lipstick. Ngasikhathi sinye, i-Gucci Matte 308 ingeyomugqa wokunethezeka we-Rouge A Lèvres Mat Lipstick yalo mkhiqizo.
Mayelana nomklamo, umkhiqizo ugqoka ukubukeka kwensimbi yezinga eliphezulu yegolide enemigqa eqondile eqinile egcwele amandla. Ingxenye ye-Gucci Logo ekhethekile iqoshwe phezulu kwekepisi elithambile le-lipstick. Ngaphezu kwalokho, le lipstick ihlangene impela futhi ibambe iqine kakhulu esandleni, ikhombisa ikhwalithi nesigaba sentombazane engumnikazi wayo.
Umbala omuhle we-Gucci Rouge Mat 308 lipstick u-Lucy Dark Orange enombala omncane onsundu ofudumele womhlaba. Lo mbala wombala uyinqaba kakhulu futhi udonsa amehlo futhi uyathopha ngokwedlulele, okwenza noma ubani owubukayo akhangwe yilo mbala obukekayo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo omkhulu we-Gucci 308 ugqugquzelwe izimbali zasentwasahlobo eziqhakaza kakhulu.
Ngokuphathelene ne-lipstick, i-super matte futhi ithambile, uma isetshenziswa, izovala ngokulinganayo ezindebeni futhi ngokushesha ikhuphuke izinga lombala kanye ne-concealer ngaphandle kokudalula izindebe zomlomo. Ngakho-ke noma usebenzisa i-lipstick egqamile, ngeke ibe nzima noma iqine ezindebeni zakho.
Ikhono lokunamathela kumbala wale lipstick ewolintshi yezitini nakho kuhle ngokwedlulele, kumsiza ukuba adle futhi aphuze usuku lonke. Izithako ze-lipstick nazo ziphephe kakhulu, zinikeza i-lip balm esebenzayo kanye nomphumela wombala ojwayelekile kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 850,000 VND.
>>>>> I-lipstick eyi-10 enhle kunazo zonke ebomvu yezitini wonke umuntu wesifazane kufanele abe nayo
3.4 Gucci 25 Goldie Red lipstick
Lona umugqa we-Gucci matte lipstick eqoqweni le-Gucci Rouge À Lèvres Voile Mat futhi waziwa ngokuthi “Indlovukazi” yomhlaba wezindebe. I-Gucci 25 Goldie Red lipstick ithola amaphuzu ngomklamo okhangayo onethoni ephuzi eyinhloko, ehlanganisa imigqa eqondile nethambile, esezingeni eliphakeme kakhulu.
Umkhiqizo unegobolondo eliyingqayizivele, elifana nomsebenzi wobuciko kunezinto ezijwayelekile zokuzilungisa emakhabetheni abesifazane. I-lipstick iklanywe nge-bevel encane phezulu ukuze iyenze ibe lula futhi isetshenziswe kalula ezindebeni, eveza ubuhle.
Mayelana nokuthungwa, i-lipstick ye-Gucci 25 ithambile futhi izacile, uma ifakwa ezindebeni, ibushelelezi ngokwedlulele. Ngaphezu kwalokho, lo umbala obomvu nopinki ogqamile, futhi uheha kakhulu amantombazane athanda ubuntu obumnene kodwa obungekho ngaphansi. I-Gucci 25 Goldie Red ingumbala obomvu we-rose wakudala futhi osemfashinini futhi osemfashinini. Le toni futhi kulula kakhulu ukuyihlanganisa nezitayela eziningi zokuzilungisa ezihlukene kusukela kwabavuthiwe, okowesifazane kuya kokuguquguqukayo okuxutshwe nobusha obuncane …
Le lipstick izofaneleka kakhulu kumantombazane anebala elimhlophe noma amahloni amancane. Futhi ukushesha kombala nakho kuhle, uma udla futhi ungaphuzi kakhulu, kuzogcinwa cishe amahora ayi-6. Ngokuqondene nephunga, iphunga elimnandi lezimbali, elihlanganiswe nesithako se-benign lipstick, ngakho-ke kulula kakhulu ukuyishaya futhi kuphephile ukuyisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 1,250,000 VND.
>>>> [Review] Imuphi umugqa we-Clio lipstick omuhle kakhulu futhi owubukhazikhazi namuhla?
3.5 Gucci 504 Matte Myra Crimson
I-lipstick yokugcina ye-Gucci esifuna ukuyincoma i-Matte Myra Crimson evela eqoqweni le-Rouge À Lèvres Matte Lipstick. Ngakho-ke akekho ongamelana ne-charm yale Gucci 504 Matte lipstick.
Mayelana nomklamo, le Gucci 504 isenegobolondo eliyindilinga eliyindilinga eliyindilinga eligcwele igolide lekhwalithi ephezulu elihlanganiswe nemigqa ecijile. Ngaphezu kwalokho, i-lipstick ye-Gucci 504 inokubukeka kobukhosi nomuzwa, ubuhle obuhle kodwa obunethezeka. Uma ubambe uqine kakhulu, ichopho le-lipstick limbozekile, ngakho abasebenzisi bangakha kalula i-contour ngaphandle kokuyigcoba.
Mayelana nombala we-lipstick, i-Gucci 504 inobuntu obubomvu obunesibindi, ukubonakaliswa kwamantombazane avuthiwe, ubuntu kanye namantombazane aphakeme kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ibuye ifanele wonke amathoni esikhumba, izitayela eziningi ezahlukene kanye namantombazane avilaphayo ukwenza amehlo.
I-lipstick yalo mugqa weGucci 504 iyindawo ekhanga kakhulu. Iwukuthungwa kwe-matte, kodwa ayiwomisi izindebe uma isetshenziswa. Uma isetshenziswa, ungabona ukuthi i-lipstick isakazeka njengongqimba lwempushana ebushelelezi, ebushelelezi kakhulu futhi inamathela ezindebeni. Ukugcinwa kombala kuhle kakhulu, i-lipstick idla ngokushesha ezindebeni ngaphandle kokushiya noma yikuphi ukukhanya.
Intengo yereferensi ye-Son Gucci 504 Matte Myra Crimson cishe i-990,000 VND.
I-lipstick ye-Gucci Akukaze kuphume ekushiseni, kodwa ngokuphambene nalokho, kuya ngokuya kuthandwa futhi kwaziwa ngokuthi “inkosi” yomhlaba we-lipstick. Ngakho-ke, ulindeleni ngaphandle kokuzithengela i-lipstick yekhwalithi ye-Gucci ukuze ube nezindebe eziyengayo, ezinothando. Kanye nokubonisa ikilasi lakho nobuhle lapho uvela phambi kwesixuku!
>>>>> [Review] Imibala engu-8 emihle kakhulu ye-Romand lipstick yamantombazane
Xem Thêm Đường tinh luyện là gì? Tác hại của đường tinh luyện đối với sức khỏe | Muasalebang